Vaovao - Ny fanadihadiana dia nahitana ny areti-mandringana Covid-19 dia niova haingana tamin'ny fihetsika sy fahazarana mividy kidoro
Ny Better Sleep Council dia manao fikarohana isan-karazany momba ny mpanjifa mba hanampiana ireo mpanamboatra kidoro sy ny indostrian'ny fandriana malalaka kokoa hamaly tsara ny filan'ny mpanjifa, hiandrasana ny fironana ho avy ary hanatsara ny ezaka ara-barotra. Ao anatin'ny fizarana fikarohana feno farany, ny BSC dia manadihady ny fomba nanovan'ny areti-mandringana Covid-19 sy ny fanafainganana ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny fitondran-tenany mifandraika amin'ny torimaso, ny fahasalamana ary ny fivarotana kidoro. Ny fikarohana, natao tamin'ny taona 2020, dia ampahany amin'ny andiany nanomboka tamin'ny 1996 izay mamela ny indostria hanaraka ny fiovana sy ny fironana rehefa mandeha ny fotoana. Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2020, ny BSC dia nanao fanadihadiana faharoa izay mifantoka amin'ny fomba fampiasan'ny mpanjifa ny tsikera an-tserasera hikaroka kidoro sy handraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Miaraka, ny valin'ny fanadihadiana roa dia manome fahitana sarobidy azon'ireo mpanamboatra ampiasaina hanatsarana ny asan'izy ireo sy hanompoana ireo mpiantsena tsara kokoa. Vakio hatrany.
Ny fanadihadian'ny mpanjifa malalaka nataon'ny Better Sleep Council dia mahita fanohanana mitombo amin'ny fividianana kidoro an-tserasera sy ny fihenan'ny fahalianan'ny mpanjifa amin'ny fampiasana fitsidihana fivarotana ho loharanom-baovao lehibe ho an'ireo mpividy kidoro.
Ny fanadihadiana BSC dia mitantara ny fanovana lehibe eo amin'ny tsenan'ny fivarotana kidoro.
Nahita vaovao tsara ho an'ireo mpivarotra mpivarotra kidoro amin'ny alàlan'ny fanadihadiana ny fanadihadiana. Ny fikarohana dia nahatsikaritra fa ny safidin'ny mpanjifa ny fividianana kidoro an-tserasera dia miakatra hatrany, indrindra eo amin'ireo mpanjifa tanora kokoa. Ary ireo mpanjifa tanora kokoa dia tsy dia misy dikany noho ny mpanjifa antitra kokoa ny milaza fa tena zava-dehibe ny mahatsapa sy manandrana kidoro alohan'ny fividianana.
Na dia hita aza ny fanadihadiana fa mijanona ho ampahany lehibe amin'ny sehatry ny kidoro fivarotana ireo magazay biriky sy feta, dia nanambara ihany koa fa vitsy ny mpanjifa no mihevitra ny fitsidihana fivarotana ho loharanom-baovao ilaina amin'ny fividianana kidoro.
Ary nanamarika ny fiovana lehibe teo amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa momba ny torimaso satria ny areti-mandringana Covid-19 dia nahatsapa ny fiantraikany nanerana ny firenena. Angamba mitady mitady fampiononana fanampiny ao amin'ny efitranony, ny mpanjifa mijanona ao an-trano dia mihoatra ny in-droa noho ny mpanjifa hafa maniry kidoro malefaka be.
“Ity fikarohana nataon'ny Better Sleep Council ity dia manamafy ny fitomboan'ny fampiononana an'ny mpanjifa amin'ny fividianana kidoro amin'ny Internet, fironana iray izay miaraka amin'ny fiovan'ny mpanjifa mifanitsy amin'ny fandinihana fikarohana bebe kokoa an-tserasera momba ny fitsidihana ao amin'ny magazay ho ampahany amin'ny fizotrany fikarohana,” hoy i Mary Helen Rogers , filoha lefitry ny varotra sy ny fifandraisana amin'ny International Sleep Products Association. (Ny BSC dia sampana fanabeazana ho an'ny mpanjifa an'ny ISPA.) "Izy io koa dia manome ny hevitry ny mpanjifa azo tanterahina amin'ny tontolo Covid-19 izay nanomboka niainan'ny indostria tamin'ny taona lasa, iray izay hitohy amin'ity taona ity.
"Amin'ny ankapobeny, ny fikarohana dia manolotra fahalalinan-kevitra izay azon'ny mpanamboatra sy ny mpivarotra ampiasana hampiasa tsara kokoa amin'ny mpanjifany," hoy i Rogers nanampy. "Izy io koa dia manome angon-drakitra fanaraha-maso izay scorecard amin'ny fahombiazan'ny indostria amin'ny tsingerin'ny fanoloana kidoro, antony lehibe hividianana kidoro."
Manaraka ny fironana
Ny fanadihadiana dia tsy fandraisana andraikitra vaovao ho an'ny BSC, izay nanao fikarohana momba ny mpanjifa hatrany hatramin'ny 1996 mba hahatakarana sy hanarahana ny fiovan'ny fihetsiky ny mpanjifa amin'ny olana lehibe momba ny fividianana torimaso sy ny kidoro. Ny fanadihadiana lehibe farany nataon'ny mpanjifa dia natao tamin'ny 2016.
"Ny tanjona ambonin'ity fikarohana BSC ity dia ny fanarahana ny fironana amin'ny fomba sy ny antony isian'ny mpanjifa mividy kidoro mba hampahafantarana bebe kokoa ny paikadin'ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny indostria," hoy i Rogers. "Tianay ny hanome ny indostria fahatakarana tsara kokoa momba ny zavatra mitarika ny mpiantsena hanomboka ny fizotrany, ny zavatra lanjan'izy ireo indrindra ary ny antenain'izy ireo. Tianay ny manampy ny indostria hahomby kokoa amin'ny dian'ny mpividy ary ho vonona kokoa hitarika sy hampianatra ny mpanjifa. ”
Ny fahazarana sy ny safidinao amin'ny fiantsenana
Ny fanadihadiana tamin'ny taona 2020 dia nahatsikaritra fa ny andrasan'ny mpanjifa amin'ny vidin'ny kidoro sy ny tsingerin'ny fanoloana kidoro dia mitaha amin'ny hita tamin'ny 2016, manome refy azo antoka ho an'ny indostria iray izay nahita fiovana lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fikarohana dia nanambara ihany koa fa ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny kidoro dia nihena kely nanomboka ny taona 2016, hita fa hanara-maso ny BSC raha misy fironana lehibe mivoatra.
Ny fiovana lehibe indrindra hatramin'ny 2016 dia mifandraika amin'ny traikefa fiantsenana, mampiseho ny fitomboan'ny safidin'ny fividianana kidoro an-tserasera ary tsy dia mifantoka loatra amin'ny fitsidihana ao amin'ny magazay ho loharanom-baovao amin'ny kidoro.
Fiovana iray hafa, mazava ho azy, ny fisian'ny areti-mandringana, "izay toa nisy fiatraikany tamin'ny tian'ny olona sy ny safidin'ny kidoro," hoy i Rogers.
Ireo mpanjifa izay nasaina nijanona tao an-trano tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana tamin'ny volana aogositra lasa teo dia azo inoana kokoa noho ny hafa nilaza fa mahazo torimaso mihoatra noho ny ampy izy ireo ary milaza fa ny fanatsarana ny trano sy ny fomban'ny fomba fiainana no antony iray hanoloana ny kidoro.
Ny fanadihadiana nataon'ny BSC dia nahitana antony lehibe dimy hanoloana ny kidoro, anton-javatra iray lehibe arahin'ireo mpanamboatra fandriana sy mpivarotra antsinjarany. Ny fahasimban'ny kidoro, voatondron'ny 65% ​​an'ny mpamaly, ary ny fahasalamana sy ny fiononana, voatondron'ny 63% an'ny mpamaly, no antony roa mahatonga ny fanoloana kidoro. Ny fanatsarana ny kidoro, izay misy ny fanirian'ny mpanjifa hiakatra amin'ny kidoro lehibe kokoa, dia narahin'ny 30% n'ireo namaly. Ny fanatsarana ny trano sy ny fanovana ny fomba fiainany dia voatonona ho fividianana fividianana 27% n'ireo mpandray valiny, raha 26% kosa nilaza fa ny kidoro efa tratran'ny taona iray dia niteraka fividianana.
Na dia hita tao amin'ny fanadihadiana farany aza ny fiovana maromaro amin'ny fihetsiky ny mpanjifa momba ny fividianana kidoro, dia hita fa ny mari-pamantarana manara-penitra dia miorina hatrany hatramin'ny 2016.
Ohatra, tamin'ny fanadihadiana tamin'ny taona 2020, nilaza ny mpanjifa fa ny vidin'izy ireo amin'ny kidoro kalitao dia $ 1.061. Izany dia ambany kely noho ny vidin'ny mpanjifa $ 1110 notaterina tamin'ny 2016, fa avo kokoa noho ny an'ny mpanjifa 929 $ notaterina tamin'ny 2007.
Ny fanadihadiana tamin'ny taona 2020 dia nahatsikaritra fa ny mpanjifa dia nitazona ny kidoro teo aloha nandritra ny fotoana nitovy tamin'ny 2016. Ny dikan'ny 2020 dia 9 taona, saika nitovy tamin'ny 2016, izany hoe 8,9 taona. Saingy ny fe-potoana dia ambany kokoa noho ny tamin'ny 2007, raha 10.3 taona ny dikany.
Hafiriana no andrasan'ny mpanjifa hitazona kidoro vaovao? Ny fehezan-kevitry ny taona 2020 dia 9.5 taona, raha oharina amin'ny 2016 heverina ho 9.4 taona. Ny dikan'ny 2007 nandrasana dia avo kokoa noho ny 10,9 taona.
Ny fanadihadiana izay notontosaina tamin'ny alàlan'ny Fluent Research, dia santionany nasionaly nisy mpanjifa manodidina ny 1.000, olon-dehibe amerikanina rehetra 18 taona no ho miakatra izay mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny fividianana kidoro.
Ny valinteny dia saika mizara roa ny lahy sy ny vavy, misy 49% ny lahy ary 51% ny vehivavy. Hita taratra tamin'ny taona maro isan-karazany izy ireo, miaraka amin'ny 26% amin'ny sokajy 18-35 taona, 39% amin'ny sokajin-taona 36-55 (fomba nentim-paharazana heverina ho vondrona demografika kendrena ao amin'ny indostria) ary 35% taona 56 na mihoatra. Dimy amby fitopolo isanjaton'ireo namaly no fotsy, 14% no Hispanika ary 12% mainty.
Ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana dia maneho ihany koa ireo faritra efatra lehibe amin'ny firenena, izay 18% no monina any Avaratra Atsinanana, 22% monina any atsimo, 37% miaina any afovoany andrefana ary 23% no monina any Andrefana. Roa amby telopolo isan-jato no miaina amin'ny toerana an-tanàn-dehibe, 49% miaina amin'ny toerana amoron-tsiraka, ary 19% miaina any ambanivohitra.
Ny valinteny rehetra dia nilaza fa nandray anjara andraikitra tamin'ny fikarohana kidoro sy ny fividianana fanapahan-kevitra, miaraka amin'ny 56% amin'ireo mpamaly milaza fa tompon'andraikitra irery izy ireo, 18% milaza fa tompon'andraikitra voalohany izy ireo, ary 26% milaza fa mandray anjara amin'ny fikarohana ary mividy ny fizotran'ny fanapahan-kevitra.
Ny valin-kafatra dia hita taratra ihany koa amin'ny karama isan-karazany amin'ny fidiram-bola ao an-trano, miaraka amin'ny 24% manana fidiram-bola ao an-trano latsaky ny $ 30,000, 18% manana fidiram-bola $ 30,000- $ 49,999, 34% manana karama ao an-trano $ 50,000- $ 99,999, ary 24% manana karama ao an-trano $ 100,000. na mihoatra.
Dimy amby dimampolo isan-jaton'ireo namaly no nampiasaina, raha 45% kosa tsy niasa, tarehimarika azo inoana fa maneho ny taha ambony noho ny tsy fananan'asa hita nandritra ny areti-mandringana, hoy ny BSC.
Lamba latabatra PEVA, Mpihazakazaka latabatra, Farafara fandriana microfiber, Cover Milky Flannel Duvet, lamba famaohana an-dakozia, Fandriana volon'ondry coral,